8A Lakefront, Duplex Cabin *AC * WiFi * Cable TV - I-Airbnb
8A Lakefront, Duplex Cabin *AC * WiFi * Cable TV
Nje Izinyathelo zokuya echibini le-Sparkling, kule Ndlu Eyakhiwe Ngamapulangwe entsha eneminyaka engu-100 ubudala, esethwe njengekamelo lehhotela elihlanganisa indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela, imibhede emibili yobukhulu beNdlovukazi, i-BBQ, umgodi womlilo, Isivakashi esilawulwa Ukushisa ne-Air conditioning, i-Cable TV, I-WIFI nefoni.
.Izikebhe, ama-Kayaks nama-Canoes ayatholakala ukuze izivakashi zisisebenzise echibini mahhala.
Ama-acres emizila yemvelo yokuqwala izintaba (Imizila ivaliwe Phakathi Nenkathi Yokuzingela, Oct1 kuya ku-Jan 1 )
.Located Approx. 5 miles from Bethel woods Concert Center (Woodreon 1969)
Setha njengekamelo le-Motel, imibhede emibili ye-Queen Isikrini esikhulu se-TV, Indlu Yokugezela Egcwele, i-Deck enkulu ebheke ichibi, umgodi womlilo wamalahle nokuningi
* * * Sicela Uqaphele:
sinama-acres angu-120 emizila yemvelo, asivumeli ukufinyelela kunoma yiziphi Izivakashi phakathi nenkathi yokuzingela eqala ngo-October 1 ekupheleni kuka-May 1
4.88 · 92 okushiwo abanye
Ebekwe kude esifundeni sase-Catskills e-New York, i-Lake Huntington ingamakhilomitha ambalwa ukusuka e-Delaware River ende nomoya kanye nomngcele wase-Pennsylvania. Izivakashi zithola leli chibi elingama-acre angu-82 liyindawo ejabulisayo yokushaywa wumoya kude nesiphithiphithi sase-New York City. Ukudoba, ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngesikebhe noma nje ukubeka ithawula ogwini nokutshuza elangeni kuyizinto ezimbalwa ezenziwayo e-Lake Huntington.
I-Lake Huntington yichibi elitshalwe entwasahlobo e-Sullivan County elinokujula okulinganiselwa kwamamitha angu-17. Nje Izinyathelo zokuya echibini, kusukela kule Ndlu Eyakhiwe Ngamapulangwe entsha eneminyaka engu-100 ubudala, ilungiswe ngokuphelele kulo nyaka, izindawo zaphansi zokhuni, i-deck, i-BBQ, Ukushisa ne-Air conditioning, i-Cable TV nefoni wonke amasevisi asekhaya, ukuhamba uye ezindaweni zokudlela nama-Pub, izikebhe zemigqomo, isikebhe se-Paddle, ama-Kayaks, ama-Canoes kanye namamayela angu-5 kuphela ukuya ehlathini lase-Bethel
Ngena edolobheni elincane elihlala e-Lake Huntington, uma kungenxa yokuvakasha kwangempelasonto kuphela. Donsa umoya entabeni bese uphuza ikhofi ngenkathi ubheka ukuphuma kwelanga ekuseni ngaphesheya kwechibi. Kunzima ukukhathazeka ngaleli chibi!
* * * * Sicela Uqaphele: Indawo yokungena imoto okwamanje isesimweni esingesihle kodwa iyadlula iyatshe futhi iyakhuphuka